Sanadguuradii 60aad ee ka soo wareegtay xorriyada Somalia ayaa laga xusay dalka… – Hagaag.com
Sanadguuradii 60aad ee ka soo wareegtay xorriyada Somalia ayaa laga xusay dalka…
Posted on 1 Luulyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Aqalka Madaxtooyada Qaranka ayaa lagu qabtay 60 sanoguuradii ka soo wareegatay Xornimada Gobolada Koonfurta, israacii iyo midowgii Gobolada Koonfurta & Waqooyiga Somalia.
Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qaybgalay Munaasabadda 1-da Luulyo, oo sanadkan lagu qabtay Xarunta Villa Somalia.
Qoraal lagu daabacay barta Villa Somalia ku leedahay shabakadda bulshada wada xiriiriso ee Facebook ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha uu Arbacada maanta jeedin doono khudbadda uu ugu talagalay Munaasabadda 1-da Luulyo.
Dhinaca kale Waxaa Magaalada Baydhabo ee Xarunta Ku-meel-gaarka ee Maamulka Koonfur Galbeed lagu qabtay Munaasabadda 1-da Luulyo, oo 60 sano ka hor Gobolada Koonfurta ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga.
1-da Luulyo waa maalin ku weyn quluubta ummada Soomaaliyeed, oo ay tahay maalintii ay heeryada gumeystaha iska dulqaadeen Goboladii Koonfureed, ayna israaceen Gobolada Koonfurta & Waqooyiga Somaliya.
Munaasabadda 1-da Luulyo ayaa xalay lagu qabtay Xarunta Madaxtooyada Baydhabo.
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen), Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, markii xilliga kala wareegga saacadda ay ku beegneyd 12:00 am.
Dhinaca kale Munaasabad ay soo qaban-qaabisay Madaxtooyada Puntland, laguna maamuusaayay 60 sano guuradii ka soo wareegatay madaxbannaanida dalka ayaa xalay lagu qabtay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Munaasabadda oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyada ee Waqooyiga Gaalkacyo ayaa ka qeyb galay dad badan oo madax hore ay ku jirto.
Dhinaca kale Magaalada Caabduwaaq ayaa xalay si weyn looga xusay 60 sanoguurada ka soo wareegtay israaca labada gobol.
Munaasabadda 1-da Luulyo oo lagu qabtay Xarunta Agoonta ee Taakulo ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxweynaha Galmudug, Madaxweyne Kuxigeenka, Golaha Wasiirada, Xildhibaano iyo qaybaha bulshada.
Madaxweynaha Galmudug iyo Kuxigeenkiisa ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidamada Qalabka Sida, markii xilliga kala wareegga saacadda ay ku beegneyd 12:00am.